Shandong Hengrong Packaging Iimveliso Co., Ltd. yinkampani enkulu yokuhlanganisa imveliso, uphuhliso kunye nokuthengisa kunye nokugxila kwimveliso yeemveliso eziphambili ezinje ngeebhegi zeFIBC, ibhegi ephothiweyo, iingxowa zeBopp, iingxowa zemesh, iingxowa zephepha amashishini, ukupakishwa kwemveliso, ukuthuthwa, indawo yokugcina izinto kunye nolungiselelo.
Inkampani yethu inezinto zobuchwephesha kunye nobuchule ekhaya nakumazwe aphesheya kwaye zonke iimveliso zenziwe nge-100% yezinto ezinyulu. Oomatshini bethu bokuzoba ucingo banokuvelisa iintambo ezahlukileyo ezinemibala kunye nezityebileyo ngamandla aphezulu, ipropathi yolwandiso ebalaseleyo, i-UV egqwesileyo kunye nokuchasana neoksijini, enokuhlangabezana neemfuno kubathengi ngokusetyenziswa okuphindaphindiweyo.
Oomatshini bokuluka banokuvelisa i-25-500cm yelinen ebanzi ebanzi enomgangatho osicaba, i-gloss ephezulu, amandla aphezulu aqine kunye nobomi benkonzo ende, ezinokuthi zinciphise iindleko kunye namanani abasebenzi kubathengi. Ukuxhotyiswa ngobuchwephesha obuphambili, oomatshini bokugquma banokuvelisa ilaphu eligadileyo lomelele kwaye lihlale ixesha elide, kunye nobomi benkonzo ende kunye nothuli / umphumo wobungqina obunomdaka. Ephethe ubuchwephesha obugqwesileyo, oomatshini bokuthunga banokuvelisa uhlobo lwe-FIBC, u-U uhlobo lwe-FIBC, iingxowa ezixakekileyo, iingxowa ezingena umoya, kunye neengxowa zemilo ezingaqhelekanga, iingxowa zemilenze, zonke ezo zibonakaliswa uyilo olusengqiqweni, inkangeleko enomtsalane kunye nokusebenza kwexabiso eliphezulu. Ngesakhono sokuphumeza imveliso enkulu, inkampani yethu inokuhambisa ngokukhawuleza iimveliso ngokusekwe kwikhonkco elisondeleyo phakathi kweenkqubo ukusuka ekufumaneni iodolo ukuya kunikezelo.
Sisekele inkqubo epheleleyo yolawulo lomgangatho phantsi kolawulo lomgangatho olungqongqo kunye novavanyo ekufuneka luphunyezwe kwinkqubo nganye yazo zonke iimveliso ukusuka ekungeneni kwezinto ukuthunyelwa kweemveliso ezigqityiweyo, kwaye i-100% yeemveliso ezigqityiweyo kufuneka zivavanywe kwaye zicocwe ukuqinisekisa ukucoceka, inkangeleko ecocekileyo.
Ngeqela loyilo lobuchwephesha, sinokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokupakisha kunye nezisombululo ngokuhambelana neemfuno zabathengi ezahlukeneyo, kwaye sinikezele ngaphezulu kwe-1,000 yeendlela zoyilo lwabathengi bethu abavela eMntla Melika, eMzantsi Melika, e-Australia, eYurophu nase-Asia. Eyilwe kakuhle kwaye iveliswe ngokugqibeleleyo, iimveliso zethu zehlisa kakhulu iindleko zokuthengwa kwabaxumi bethu, kwaye zithandwa kakhulu ngabaxumi bethu kwihlabathi liphela.
Ngeendlela zorhwebo eziguqukayo nezizizo, inkampani yethu inokubonelela ngeenkonzo ze-ODM kunye ne-OEM. Samkela ngentliziyo iphela abathengi abadala nabatsha kwihlabathi liphela kwinkampani yethu yothethathethwano lweshishini kunye nentsebenziswano. Kwaye, siya kwenza konke okusemandleni ethu ukubonelela abathengi bethu ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo!